Johnson 5.5 HP Seahorse Akụ-Up Project | Outboard Boat Motor Mmezi
Johnson 5.5 HP Seahorse Akụ-Up Project
Banye or aha biputere kwuru
Ọ bụrụ na ị nwere a ikwu ma ọ bụ ajụjụ banyere nke a Johnson 5.5 HP Seahorse, ma ọ bụ yiri Akụ-UP Project, biko ahapụ ha n'okpuru ebe a. Ị ga-emerịrị ya Banye ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ịhapụ ihe.
Ị nwere ike ugbu a nbanye gị Facebook akaụntụ.
osụk site Sean952 na Solomon, 09 / 11 / 2017 - 08: 15
Ịnọdụ na mpaghara ala
Enyochawo m ihe niile nke ọma ma enweghị ike ịchọta ihe mere mgbe m gbanyesiri moto m niile ka ihe niile dị na ụlọ elu ahụ nwere onwe ya ma ọ bụ ihe dị mma, ma mmalite nke mmalite ahụ siri ike ma mgbe ọ na - agba mbọ iji aka ya wepụ ya. Enweghị mbe ma ọ bụ na-akụ mkpọtụ, ọ dịghị ihe yiri ka ọ bụ ebe ọ bụ na ọ bụghị n'efu spinning ... enyemaka ọ bụla dị egwu.
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 14 / 2017 - 11: 58
Ị tinyere akara ọhụrụ? ...
Ị tinyere akara ọhụrụ? Mgbachi ọhụụ ọhụrụ nwere ike ime ka ihe yie ka oge na-aga. Otu ihe na-eme ka ọ dị ọhụrụ. Nye ya awa ole na ole ka ị daa ma hụ ma ọ dị mma.
osụk site Sean952 on Tọs, 09 / 14 / 2017 - 21: 00
Na zaghachi Ị tinyere akara ọhụrụ? ... by ttravis
Enweghị m ihe ọkpụkpọ ma ọ bụ ...
Enweghị m ihe mgbochi ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla dị na mpaghara ala ma ọ bụ ihe kpatara ya mere m ji nwee mgbagwoju anya.
osụk site ttravis on Fraị, 09 / 15 / 2017 - 12: 00
Na zaghachi Enweghị m ihe ọkpụkpọ ma ọ bụ ... by Sean952
Kedu ihe ga-eme ma ọ bụrụ na i gbalịrị ...
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị gbalịrị iji aka gị gbanye mgbatị ahụ, ma ọ bụ kechie eriri gburugburu ya iji gbalịa iji eriri malite ụzọ ochie ahụ?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - ewepụ ala dị ala ma gbalịa ịmalite ya?
osụk site isi on Tọs, 03 / 22 / 2018 - 21: 17
olee ebe ị ga-etinye aka mgbe ị na-eguzobe ọdịiche?
M na-edochi eriri na ihe / condenser na ejiri 1956 Johnson CD-13A 5.5hp.
Ana m agbalị ịtọ usoro na-agba ọsọ na oge site na usoro voltmeter.
Ebee ka ị na-etinye ihe nlele iji lelee oge ma mee ka ọdịiche dị? Ahụwo m ụfọdụ okwu efu, ndị ọzọ na - asịkwa WOT. Ụfọdụ na-ekwu na ọ dịghị ihe dị iche, mana nke ahụ anaghị adị m mkpa.
Ihe na-ebugharị efere na akara ngosi oge, n'ihi ya, ọ ghaghị ime mgbanwe ebe ọnye ahụ dị.
Kedu ihe m na-efu? ekele
osụk site raysmythe on Tus, 04 / 03 / 2018 - 13: 26
Na zaghachi olee ebe ị ga-etinye aka mgbe ị na-eguzobe ọdịiche? by isi
M mere nnọọ 3 hp lightwin ...
Naanị m mere 3 hp lightwin maka oge mbụ na sorta ahụ tụbara m ruo mgbe m lere ma hụ na ọ bụ ezie na efere ahụ na-agagharị na kamera, ihe ndị ahụ na-adị na cam, n'ihi ya ọ dịghị mkpa. Dị ka ihe bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịchichapụ akara gị mgbe ị na-edozi oge, ọ bụrụ na ị malitere na ọnọdụ "mmalite," ị nwere ike ịmegharị isi gị n'akụkụ cam na ntụziaka ọ bụla. Ka o sina dị, ekpebiri m ileghara ọnọdụ ahụ na mgbe e mere m, moto m nwetara maka nnwere onwe na-agba ọsọ dị ka n'elu ... banyere $ 30 na mpaghara mpaghara.
Ya mere, akara ala, o nweghị ihe dị mkpa, ma ọ nwere ike ịba uru n'ọnọdụ ụfọdụ karịa ndị ọzọ, dabere na ọrụ dị n'aka. Obi ụtọ na-akpali akpali!
osụk site tonyr123 na Solomon, 04 / 01 / 2019 - 09: 59
Enwetara m ihe ọ bụla eweghachite ebe, obere ala, nnukwu gaskets na carburetor, na nkwụnye ọhụrụ. Ọ na-agba ọsọ maka naanị otu nkeji ma nwụọ oge mbụ na oge nke abụọ na-amalite ụzọ nke nwụrụ n'ụzọ ziri ezi.
Onye nwere ike inyere m aka ....
osụk site Fischer on Tus, 04 / 16 / 2019 - 20: 56
1960 Johnson SeaHorse CD-17 Power Unit Enyemaka
Na-enwe obi ụtọ iji weghachite 1960 Johnson Seahorse 5.5
Enwetara m na mgbochi ụzọ. Enweghi ike ịchọta onye ọ bụla ka ọ kewaa okwu ahụ ma kpoo ya ma dochie pistons na yiri mgbaaka. Na-achọsi ike ịnwale onwe m ma ọ bụrụ na m nwere ike ịcha mma pistons na yiri mgbaaka.
Daalụ na mbu maka enyemaka gị.
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 06 / 12 / 2019 - 14: 49
Ngalaba 5.5 HP 4 weghachite video
Onye a hapụrụ ikwu na ha na-achọ 4 akụkụ youtube video na iweghachi Johnson 5.5. Okwu mbụ ahụ furu efu n'ihi na enwetara m saịtị a (mgbe ụfọdụ), ọ ga-eweghachite site na ndabere nke dị ụbọchị ole na ole.
Echere m na nke a nyocha ọchụchọ youtube ga-enweta vidiyo ndị ị na-achọ.
Aga m ewe oge iji nyochaa ihe ndị a ma eleghị anya tinye na saịtị a.
Ndo, enwere m nkọwa mbụ.
osụk site Paramount1953 on Tus, 09 / 24 / 2019 - 19: 41
Ọ nwere onye nọ ebe ahụ maara koodu agba ụcha n'ezie maka XroonX XXX XX XX acha acha? Y’oburu, kedu ihe o bu? M nọ n’etiti iwughachi ụgbọ ala a dị oke mma na mgbe ọ banyekwara n’ime omimi ma baa n’ime moto ahụ, m kpebiri, sị, “Gịnị bụ ihe ahụ? Enyemaka ọ bụla na nke a ga-enwe ekele karịa. Daalụ!
osụk site fabelknap na òtù ezinụlọ, 09 / 25 / 2019 - 07: 59
Na zaghachi Koodu agba agba maka 1958 5.5 hp CDL-15 motors? by Paramount1953
ejighi n'aka koodu eserese, mana zụtara agba nke dị n'okpuru njikọ wee tinyeghachi ihe 1955, Ọ bịara buru oke ibu. Ihọd nwere agba ndị ọzọ.
osụk site fabelknap na òtù ezinụlọ, 09 / 25 / 2019 - 07: 53
Emere m ntụgharị mmanụ na 1955 5.5 HP Johnson Seahorse site na tank siri ike gaa na tanphon tank. Otu ihe m chọpụtara bụ ahịrị kwụsịrị oghere ihe oriri ga-ejupụta na gas mgbe ihe dị ka elekere 1 / 2 dị. nke a ga - eme ka mmanụ ọgbụgba kwụsị ihe mgbapụta na - enweghị oghere ikuku sitere na esite n'ọdọ mmanụ. Ọ nwere onye ọzọ nweburu okwu a, ma ọ bụ nwee ndozi maka nke a?
Nchigharị ahụ nyere ntuziaka njikọ dị n'okpuru. daalụ
osụk site Paramount1953 na Solomon, 09 / 30 / 2019 - 20: 10
Daalụ nke ukwuu maka ozi gbasara agba agba maka 1958 "Seahorse". Agbasara m agba agba nke mbụ obere oge obere oge gara aga, ọ na-akpọkwa nkụ ka m na-edepụta nke a. Weebụsaịtị a dị egwu. Emegogharigharị ngozigharị m site na “rag tag” ka ọ bụrụ ọrụ “ọkachamara” nke ukwuu. Anya! Ana m atụ anya biputere foto n’oge na-adịghị anya agwụcha. Daalụ m ọzọ.
5 ọnwa 1 izu gara aga